Police arrest people in Yangon, Myanmar, on February 27, 2021. At least five journalists remain in detention over their coverage of anti-coup protests.
မြန်မာ Herald သတင်းသမား ရဲမျိုးထွန်းကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ဖို့နဲ့ သတင်းသမားတွေ သူတို့ အလုပ်တာဝန် သူတို့လုပ်ဆောင်တဲ့ အတွက် ဖမ်းဆီး ထောင်ချတာကို ရပ်ဆိုင်းဖို့ CPJ သတင်းသမားများကာကွယ်ရေး ကော်မတီက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရဲမျိုးထွန်းကို ပုသိမ်အထူး တရားရုံး တရုံးက ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ၊ လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ သတင်းမှားဖြန့်ချီမှု၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) အရ ထိတ်လန့်စရာ အချက်လက်တွေကို ထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှု တို့အရ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲမျိုးထွန်းဟာ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု တွေကို သတင်းသမား ဝတ္တရားအတိုင်း ဖေါ်ပြခဲ့တာ ဖြစ်တယ်၊ မြန်မာစစ်ကောင်စီ အနေနဲ့ မှားယွင်းစွာ ဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ သတင်းသမားတွေကို ပြစ်ဒဏ် မစီရင်ပဲ ပြန်လွှတ်ပေးသင့်တယ်လို့ CPJ ရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ အကြီးတန်းကိုယ်စားလှယ် Shawn Crispin ကဆိုပါတယ်။ ရဲမျိုးထွန်းကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာဟာ တခြား သတင်းသမား ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ ကမာရွတ်မီဒီယာက ဟံသာငြိမ်းနဲ့ မဉ္စိမသန်းထိုက်အောင် တို့ကို အမိန့်ချတဲ့ ရက်သတ္တပတ် အတွင်းမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ CPJ ရဲ့ စာရင်းအရ တရုတ်ပြီးရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ သတင်းသမားတွေကို အပြစ်ပေးတဲ့ ဒုတိယ အများဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
မွနျမာသတငျးသမားတှကေို အမွနျဆုံး ပွနျလှတျဖို့ CPJ တောငျးဆို
မွနျမာ Herald သတငျးသမား ရဲမြိုးထှနျးကို ခြှငျးခကျြမရှိ အမွနျဆုံး ပွနျလှတျဖို့နဲ့ သတငျးသမားတှေ သူတို့ အလုပျတာဝနျ သူတို့လုပျဆောငျတဲ့ အတှကျ ဖမျးဆီး ထောငျခတြာကို ရပျဆိုငျးဖို့ CPJ သတငျးသမားမြားကာကှယျရေး ကျောမတီက တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။
ရဲမြိုးထှနျးကို ပုသိမျအထူး တရားရုံး တရုံးက ပွဈမှုဆိုငျရာ ပုဒျမ ၅၀၅ (က) ၊ လှုံ့ဆျောမှုနဲ့ သတငျးမှားဖွနျ့ခြီမှု၊ ပွဈမှုဆိုငျရာ ဥပဒေ ပုဒျမ ၅၀၅ (ခ) အရ ထိတျလနျ့စရာ အခကျြလကျတှကေို ထုတျဝဖွေနျ့ခြီမှု တို့အရ ထောငျဒဏျ ၂ နှဈ ခမြှတျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
ရဲမြိုးထှနျးဟာ မွနျမာစဈတပျရဲ့ ရကျစကျကွမျးကွုတျမှု တှကေို သတငျးသမား ဝတ်တရားအတိုငျး ဖျေါပွခဲ့တာ ဖွဈတယျ၊ မွနျမာစဈကောငျစီ အနနေဲ့ မှားယှငျးစှာ ဖမျးဆီးထောငျခထြားတဲ့ ဒါဇငျနဲ့ခြီတဲ့ သတငျးသမားတှကေို ပွဈဒဏျ မစီရငျပဲ ပွနျလှတျပေးသငျ့တယျလို့ CPJ ရဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှဆိုငျရာ အကွီးတနျးကိုယျစားလှယျ Shawn Crispin ကဆိုပါတယျ။ ရဲမြိုးထှနျးကို ပွဈဒဏျခမြှတျတာဟာ တခွား သတငျးသမား ၂ ဦးဖွဈတဲ့ ကမာရှတျမီဒီယာက ဟံသာငွိမျးနဲ့ မဉ်စိမသနျးထိုကျအောငျ တို့ကို အမိနျ့ခတြဲ့ ရကျသတ်တပတျ အတှငျးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံဟာ CPJ ရဲ့ စာရငျးအရ တရုတျပွီးရငျ ကမ်ဘာပျေါမှာ သတငျးသမားတှကေို အပွဈပေးတဲ့ ဒုတိယ အမြားဆုံး နိုငျငံ ဖွဈပါတယျ။